Dowladda Soomaaliya oo ku amartay wakiilka haayada FAO u qaabilsan Soomaaliya in uu dalka uga baxo saddex beri gudahood - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDowladda Soomaaliya oo ku amartay wakiilka haayada FAO u qaabilsan Soomaaliya in uu dalka uga baxo saddex beri gudahood
June 17, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Wakiilka haayada FAO u qaabilsan Soomaaliya Richard Trenchard. [Sawirka: Screenshot]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dowladda Soomaaliya ayaa ku amartay wakiilka haayada FAO u qaabilsan Soomaaliya Richard Trenchard in uu ka baxo dalka, sida ay sheegeen ilo-wareedyo dowladda katirsan.
Ilo-wareedyada ayaa sheegay in wakiilka Soomaaliya u jooga FAO lagu eedeeyay qeybinta abuur aan wanaagsanayn, waxaana loo qabtay saddex beri gudahood in uu Soomaaliya uga baxo.
FAO ayaa ah haayada Qaramada Midoobay u qaabilsan cunada iyo beeraha.
June 8, 2017 Maleeshiyaad Al-Shabaab katirsan oo weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada Puntland ku leeyihiin Buuraha Galgala
July 31, 2017 Masuulkii Al-Shabaab u qaabilsanaa Muqdisho oo lagu dilay duqayn diyaaradaha Mareykanka ay qaadeen
President Farmajo to visit Puntland for the first time
Dowladda Federaalka Soomaaliya oo maamulka Somaliland wadahadalo kula leh dalka Jabuuti
Jabuuti-(Puntland Mirror) Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Axad ah wadahadalo kula yeelatay maamulka Somaliland dalka Jabuuti. Wefdi uu kamidyahay Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi, si lamid [...]
Ciidamo katirsan Puntland oo tabobar ugu soo gabogaboobay Qardho
Qardho-(Puntland Mirror) Boqolaal ciidamo katirsan Puntland ayaa maanta oo Sabti ah muddo bilooyin ah tababar uga socday xerada Xorgoble oo kutaala magaalada Qardho uu u soo gabogaboobay, iyadoo uu goobjoog ahaa madaxweyene ku xigeenka Puntland [...]